version 0.3.9 – ပိုမိုအဆင်ပြေလွယ်ကူ
ဒီဇင်ဘာလ 26, 2009 အားဖြင့် ကမ်းလှမ်းမှု5comments
အဆိုပါဗားရှင်းသစ်နှစ်ခုကအဓိကအင်္ဂါရပ်များပါဝင်. ပထမ widget ကအပေါ်ဘာသာစကားများ sort လုပ်နိုင်စွမ်းသည်, ယခုသင်ကသင့် default ဘာသာစကားပထမဦးဆုံးထည့်သွင်းခြင်းသို့မဟုတ်သင်ကြိုက်မည်သည့်လမ်းကိုလှည့်ပတ်ဘာသာစကားများရွှေ့နိုင်. icons များဘာသာစကားကို Bing ကထောက်ပံ့လျှင်သင်တို့ပြောပြကြောင်းထင်ရှား google နှင့်ဘာသာစကားညာဘက်လက်ဝဲဘက်သို့ပုံစံတိကျမ်းစာ၌လာသည်ကားဆိုရင်ပါပြီ. သင့်အနေဖြင့်မူရင်းဘာသာစကားရဲ့အမည်ကိုနှင့်၎င်း၏အင်္ဂလိပ်အမည်ကိုအကြားလည်းပြောင်းနိုင်ပါတယ်, ပင်ရှင်းလင်းဖြစ်လာသည်သောအရာအသင်သည်ဘာသာစကား သို့ဖြစ်. ပညာ.
ငါတို့သည်လည်းလှည့်ပတ်တချို့ဖိုင်တွေပြောင်းရွေ့နှင့် Ajax entry ကိုဖိုင်ကိုဖွင့်ထားတယ်, ဤထို့နောက် alternate ပို့စ် settings ကိုအကြိမ်ကြိမ်ပြုလုပ် (ကွှနြုပတြို့ ... မြွှောလငြ့ပါတယြ, သင် bug တွေကြောင့်တွေ့လျှင်ကျွန်တော်တို့ကိုသိစေ) အရာယေဘုယျအားဖြင့် snappier ကို. သင်ရုံဟောင်းကိုတချက်ဗားရှင်းအသစ်ကို unzipping ဖို့အသုံးပြုနေတယ်ဆိုရင်, က Sub-directory များ၌မနေသောသူအပေါင်းတို့သည်ဖိုင်တွေကိုပယ်ဖျက်ဖို့ယခုသည်အန္တရာယ်ကင်းကြောင်း (transposh.php အဘို့အကိုကယ်တင်) heck, ကျနော်တို့ကပင်အကြံပြုပါသည်…
တချို့ကပိုပြီးစိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းအင်္ဂါရပ်များကိုလာမည့်လွှတ်ပေးရန်စီစဉ်ထားကြသည်, နှင့်သင်အသိစောင့်ရှောက်ချင်တယ်ဆိုရင်. ကျွန်တော်တို့ရဲ့ twitter စမ်းချောင်း Follow…
အောက်တွင်တင်သွင်း: သတင်းထုတ်ပြန်ချက်ကြေညာချက်များ အတူ Tagged: ထိန်းချုပ်မှုစင်တာ, အသေးအဖွဲ, လွှတ်ပေး, widget က, wordpress မှာ plugin
Richard Hernández ကပြောပါတယ်
ဒီဇင်ဘာလ 26, 2009 တွင် 7:57 ညနေ
I just installed your plugin and I’d like to say THANK YOU!! It’s really useful, easy to use, no time consuming and customizable to correct wrong automatic translations. I found something I think it’s not working well. There are places in which I can not correct translations. The orange/green symbols appears but when I click on them the light-window is not coming up. ဥပမာအားဖြင့်: everything works well in the main window of my blog (http://www.ricardofoto.es/blog/) but not when I get into any of the post. I hope it’s solver in the next version!
ဒီဇင်ဘာလ 26, 2009 တွင် 8:12 ညနေ
အချီးမွမ်းများအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်, the problem seems that jquery is being loaded twice on the inner pages, which may causeaconflict. This is either caused byaplugin oratheme, try to find jquery lines in the source and comment them. I’d appreciate that you reply here and inform others on where the conflict was.
ဒီဇင်ဘာလ 26, 2009 တွင် 9:31 ညနေ
ဒီဇင်ဘာလ 28, 2009 တွင် 11:27 နံနက်
ဒီဇင်ဘာလ 28, 2009 တွင် 4:17 ညနေ